ယူနိုက်တက်မှာ တန်ဟတ် ဖြေရှင်းရမယ့် အဓိက ပြသနာ5ခု - xyznews.co
ယူနိုက်တက်မှာ တန်ဟတ် ဖြေရှင်းရမယ့် အဓိက ပြသနာ5ခု
April 14, 2022 - by Editor
ယခု တစ်ပါတ် အတွင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ သတင်းတွေအရ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ အဲရစ် တန်ဟတ် ကို နည်းပြသစ် အဖြစ် ခန့်အပ်ဖို့ ကြိုတင် သဘော တူညီမှု ရရှိခဲ့ပြီလို့ သိခဲ့ရပါတယ် ။ အကယ်လို့ တန်ဟတ်သာ ယူနိုက်တက် နည်းပြသစ် ဖြစ်လာရင် အရင်ဆုံး ဖြေရှင််းရမယ့် ပြသနာ5ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
(1) အသင်း ခေါင်းဆောင် ဘယ်သူလဲ ?
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ကြည့်ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင် ခေတ်အဆက်ဆက် အသင်း ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ခဲ့ကြသူတွေဟာ အသင်းဖော်တွေကို ဦးဆောင်နိုင်စွမ်း ၊ လွှမ််းမိုးနိုင်စွမ်း ရှိခဲ့ကြသလို ကွင်းထဲမှာလည်း လိုအပ်ချိန်တိုင်း မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် သူတို့ရဲ့ ခြေစွမ်းကလည်း တကယ့်ကို အားရဖွယ် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ အသင်း ခေါင်းဆောင် ဟယ်ရီ မက်ဂွားယား ကတော့ အဆိုပါ စွမ်းရည်တွေ ကင်းမဲ့ နေခဲ့သလိုပါပဲ ။ သူဟာ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်းမှာ ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်ထားသလို ကစားပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ကလပ် အဆင့်မှာတော့ ပုံစံကောင်း ပြသနိုင်ဖို့ ရုန်းကန်ခဲ့ရသလို အမှားတွေလည်း အတော်လေး ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် တန်ဟတ် ရောက်လာတာ နဲ့ ဘယ်သူ့ကို အသင်း ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ခန့်အပ်မလဲဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ ရှိနေပါတယ် ။
(2) ရော်နယ်ဒို ကို ဘာလုပ် မလဲ ?
ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒို ဆိုတာက ဘယ်အသင်းဆီကိုပဲ ရောက်ရောက် ဂိုးတွေ သွင်းယူ​ပေးသူ တစ်ဦး ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ အခုလည်း သူဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင််းအတွက် လုံလောက်တဲ့ ဂိုးသွင်းနှုန်း သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အသင်းလိုက်ကစားပုံကတော့ ထူးကဲမှု မရှိပဲ ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ် ။
အဲရစ် တန်ဟတ် ရဲ့ အေဂျက်ဇ် အသင်းကို ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် ဒူဆန် တာဒစ် ၊ ဆီဗတ်စ်တီယံ ဟော်လာ တို့ဟာ တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ အတော်လေး မွှေနှောက် ကစားနိုင်စွမ်း ရှိကြသလို အသင်းလိုက် ကစားပုံကိုလည်း အကူအညီိ ဖြစ်စေနိုင်ခဲ့ကြတာ မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။ အဲ့ဒီလို မကစားနိုင်တဲ့ ရော်နယ်ဒို ကို တန်ဟတ် ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်စရာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ။
(3) စုဖွဲ့မှု ၊ အုပ်စုကွဲခြင်း
အုပ်စု ဆိုတာ အသင်းတိုင်းမှာ ရှိပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် ဘာသာစကားတူညီတဲ့ ကစားသမားတွေ၊ အသက်အရွယ် မတိမ်းမယိမ်း ရှိကြတဲ့ ကစားသမားတွေ ၊ အကျင့်စရိုက် တူညီကြတဲ့ ကစားသမားတွေဟာ အုပ်စုတစ်ခု အဖြစ် အသင််းတိုင်းမှာ ရှိနေတတ်ကြပါတယ် ။
လက်ရှိ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းမှာ ဆိုရင် ဘရာဇီးသားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဖရက်ဒ် နဲ့ တဲလက်စ် တို့ဟာ ပေါ်တူဂီသား ဖြစ်တဲ့ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် နဲ့ တစ်ပူးပူး တစ်တွဲတွဲ ရှိနေတတ်ကြပါတယ် ။ ပြီးရင် ဒေးဗစ် ဒီဂီယာ နဲ့ ဟွမ် မာတာ တို့က တစ်တွဲ ရှိနေတတ်ကြ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ယူနိုက်တက် အကယ်ဒမီထွက်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ရပ်ရှ်ဖို့ နဲ့ လင်ဂတ် တို့က အတူတူ ရှိတတ်ကြသလို အိမ်နီးချင််းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာ နဲ့ လင်ဒီလော့ဖ် တို့က တစ်တွဲ အဖြစ် ရှိနေတတ်ကြ ပါတယ် ။ ဒါဟာ အသင်း အတွက်တော့ သိပ်ကောင်းတဲ့ အရာ တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး ။
အထူးသဖြင့် အသင်းရဲ့ ရလဒ်တွေ မကောင်းချိန်မှာ သူတို့ အချင်းချင်းကြား ပြောစရာတွေ များတတ်ပါတယ် ။ ဒါဟာ အသင်းလိုက် စည်းလုံးမှုတွေကို ပျက်ပြားစေနိုင်တာကြောင့် တန်ဟတ် ရောက်လာခဲ့ရင် အသင်းရဲ့ အဝတ််လဲခန်းကို စုစည်းပေးနိုင်ဖို့ အဓိကထား လုပ်ဆောင်ရမှာ အသေအချာပါပဲ ။
(4) စာချုပ်ပြည့်မယ့်သူတွေကို ဘာလုပ်မလဲ ?
ယူနိုက်တက်တို့ဟာ မနှစ်က အဲရစ် ဘိုင်လီ ကို စာချုပ် သက်တမ်း တိုးခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီလို လုပ်ခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း က ကစားသမားကို ပြန်လည် ရောင််းချတဲ့ အခါ စျေးကောင်းရလိုတဲ့ အက်ဒ် ဝုဝဒ် ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ ကစားသမားဟာ အသင်းအတွက်် လုံလောက်စွာ အကျိုးပြုပေးနိုင်စွမ်း မရှိခဲ့သလို ဒဏ််ရာရလိုက် ၊ အရံခုံပေါ် ထိုင်လိုက် နဲ့ပဲ အချိန်တွေ ကုန််ဆုံးခဲ့ရ ပါတယ် ။ လက်ရှိ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင််းမှာလည်း စာချုပ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မယ့် သူတွေ အများကြီး ရှိနေကြပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် အသင်းကနေ ထွက်ခွာလိုသူ ၊ ရောင်းချသင့်သူတွေလည်း ရှိနေကြပါသေးတယ် ။ ဒီလို ကစားသမားတွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာ တန်ဟတ် အတွက် ဦးစားပေး ဖြေရှင်းသင့်တဲ့ ပြသနာ တစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ ရှိနေပါတယ် ။
(5) အဝတ်လဲခန်းထဲက အရှုပ်ထုပ်များ
ဘောလုံး အားကစား လောကမှာတော့ ကွင်းအတွင်း ကွင််းအပြင် ဘာတွေ ဖြစ်သလဲ ဆိုတာထက် ကွင်းထဲမဝင်မီ အဝတ်လဲခန်းထဲမှာ ကစားသမားတွေ စည်းစည်းလုံးလုံး ရှိနေဖို့ ၊ မကြာခင် ကစားရမယ့် ပွဲစဥ်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်လိုစိတ် အပြည့်ရှိဖို့ ဆိုတာက အရမ်းကို အရေးကြီးလှပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ အဝတ်လဲခန်းထဲမှာ ညီညွတ်မှု မရှိရင် ၊ တစ်ဦး တစ်မျိုးစီ တွေးနေကြရင် ၊ လိုက်လံ စည်းလုံးပေးနိုင်သူ မရှိရင် ၊ နှောင့်တတ်တဲ့ အရှုပ်ထုတ်တွေ ရှိနေရင် ပွဲမစခင် ကတည်းက စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တစ်ပန်း ရှုံးရပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် တန်ဟတ် အနေနဲ့ အဝတ်လဲခန်းထဲမှာ စည်းလုံံးမှု ပျက်ပြားစေသူ ၊ အရှုပ်ထုပ်တွေ ရှိနေရင် သေချာပေါက်် ရှင်းထုတ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ် ။
Previous Article နိုင်ပွဲကို လူတွေနဲ့ ရင်းခဲ့ရတဲ့ စီးတီး ၊ အနာဂါတ်ကို ရွေးတော့မယ့် ဟာလန်း တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
Next Article တစ်ဝက်ကျော်လောက် အသင်းက ထွက်ချင်နေကြမှာပဲလို့ ပြောရင်း ယူနိုက်တက်မှ သေချာပေါက် ထွက်ခွာမယ့် ကစားသမား2ဦး အမည်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ပီတစ်